Imidlalo Yokulanda Ethandwa Kakhulu Ye-Android - I-Apk Yokulanda
Khipha Ku-Internet Mahhala
Ukulanda Imidlalo Yama-Apk Ethandwayo
Sebenzisa amakhono akho okudweba ezindaweni ezi-1v1
Ngena ku Teyvat, umhlaba omkhulu ogcwele ngokuphila futhi ogeleza ngamandla.Wena nomfowenu ufike lapha kusuka komunye umhlaba. Uhlukaniswe unkulunkulu ongaziwa, ohluthwe amandla akho, futhi waphonswa ekulaleni okujulile, manje usuwaphaphamele izwe elihluke kakhulu kulapho ufika okokuqala.Ngakho-ke...
Phulukisa umhlaba isiguli esisodwa ngesikhathi njengoba wakha isibhedlela samaphupho akho!
I-INFINITY MECHS ngumdlalo we-robot ongafakwanga kahle owenziwe yi-SkullStar futhi onikwe ilayisensi yi-Game Duchy. Lapha uzokwazi ukufinyelela kumthala wama-mech ngokumangala kwamasu wokwakha iqembu!Ibutho leMecha lidinga ubuholi bakho! Bukela inkundla yempi ebukhoma lapho umphumela wezinhlayiyana...
Indawo yokuhlangana nabafana abakhulu, ukukusiza uthole izimfihlo zokuwina bonke ababhuki ngezipho ezikhangayo.# Umlilo Oqhuma Umlilo - UDanh Bai Doi Thuong: umdlalo we-slot No Hu, iKhadi Game, i-Chess Game, i-Shoot fish casino Top 1 Asia. Kungcono kakhulu kunemikhiqizo yamanje emikhulu efana...
Zama umdlalo omusha wepiyano wenja yekati ngezingoma eziningi ezishaywayo nezingafani nalutho ongazitholi kunoma iyiphi eminye imidlalo yepiyano. Thepha ithayili ukuqala izingxube ze-bork izingoma ezidumile. EZIPHUMA: - Kulula ukudlala, ihluzo ezinhle- Ukukhetha okuhle komculo nezingoma.- Izingoma...
Uyemukelwa ku-Brain Up - imidlalo ephezulu yokucabanga emnandi namuhla! Puzzle eziningi olukhohlisayo futhi funny ezimele wena. Ungene ezweni elihlekisayo elingenza ingqondo yakho iqhume futhi ingenazo izinhlaka ezivamile! Ake sizibonele! 👌 🧠Umdlalo wobuchopho i-Brain Up uzokhulisa amakhono...
Fasa ibhande! Zilungiselele ukuqhuma mpintsha egcwele ezizungeze iziqhingi ezishisayo ze-Hot Wheels ™! Lapha simayelana nezimoto ezesabekayo, izinselelo zobuhlanya nokwakha imigwaqo yomjaho ebanda kunazo zonke nxazonke. Iya phambili ku-Hot Wheels ™ City ukuhlola amakhono akho nge-puzzle emnandi...
Ukuqubuka kwegciwane elibulalayo kwahlasela umhlaba wonke. Cishe sonke isintu siphenduke amaZombi. Hola abalandeli bakho ukuze basinde kwi-apocalypse: leso yisifiso sakho. I-Match-3 Puzzle ihlangabezana neQhinga! Xazulula izimfihlakalo futhi wakhe indawo engangeneki. Ikusasa lesintu lisezandleni...
Jabulela ulwazi lomzali ngemidlalo eminingi emincane manje!Gunda intshebe kababa futhi usize umsebenzi wesikole wezingane zakho.Geza izitsha bese ulungisa amabhokisi emini wezingane zakho.Dlala i-basketball egcekeni lakho ne-jigsaw ngesikhathi sakho samahhala!Sebenzisa imishini elula kakhulu efana...
Dlala umdlalo webhola omusha sha weSoccer Super Star futhi ujabulele isipiliyoni sebhola sangempela ngobuhlanya, esisheshayo nesicwilisayo!Thanda isenzo se-arcade soccer kepha uswele isikhathi sokuzijwayeza? I-Soccer Super Star entsha elula kakhulu yokufunda izilawuli zomdlalo ikuvumela ukuthi weqe...
Yakha amabutho ezilo ezinamandla. Zilungiselele ukulwa impi nabadlali emhlabeni wonke!I-Final Order ngumdlalo wamasu wesikhathi sangempela futhi ogcwele isenzo. Uzodlala njengomkhuzi ezweni elikhungethwe yimpi futhi usungule inqaba yakho yezempi. Udinga ukwakha amabutho asethuthukile futhi anamuhla...
Blast ngokusebenzisa amazinga futhi abhubhise konke phambi kwakho nge kweqembu izikhali ezimangalisayo! Ukuqoqa konke futhi kahle izimfanelo zabo ezahlukene futhi eyingqayizivele! Thumela izitha zakho ezindizayo, ziqhume izisekelo zazo futhi ziqede izakhiwo zazo! Ukubhujiswa okwanelisayo namathuba...
Kufana nokusika insipho kepha kungcono kakhulu. Sika izinto ezifana nensipho ezinomumo ohlukile nezinomusa. Yiba yi-Slicing Hero! Dlala manje futhi uzizwe ukwaneliseka okumangazayo ngemiphumela yokusika eyiqiniso, imisindo ephumuzayo nezinhlobo ezahlukahlukene zamabhande namaqhawe.
Yiba ngumphathi wamandla wokugcina!Cindezela izitha ezingenakubalwa kude namandla engqondo yakho.
Manje ungadlala umdlalo wamakhadi owaziwa kakhulu emazweni aseNingizimu Asia kumadivayisi wakho wanamuhla owathandayo! Kungumdlalo wamakhadi wokulutha futhi othandwayo wamaqhinga, amacilongo nokubhida. ICall bridge ibonakala ihlobene nomdlalo waseNyakatho Melika obizwa nge- "Spades"....
Siyakwamukela ku-Big 247 jar 86 game bai doi thuong game bai doi thuong game bai Big 247 jar 86 futhi ujabulele izikhathi ezimnandi nabangani bakho# Izikhala - Umdlalo weBai Doi Thuong: Big 247 umhlabeleli nabasebenzisi.# Ihluzo ezinhle kakhulu, Ukudlala umdlalo obushelelezi kakhulu, Umphakathi...
Ukushayela wonke amayunithi, sineCode 6!Edolobheni eligcwele ubugebengu, kunesikhulu esisodwa kuphela esingasiza ukugcina umthetho. Isikhathi sokuphendula ucingo bese ulandela umsebenzi wakho, ku-Let’s Be Cops 3D. Umshayeli oyingozi ukhululekile, futhi kuwumsebenzi wakho ukubabamba!Bukela...
Umdlalo wethu omusha woMshado unakho konke izingane zakho ezikudingayo ukudala umshado wephupho nabo bonke abangane bazo. Njengoba kunezindawo ezi-6 ezahlukahlukene, akunamkhawulo ezindabeni abazokwazi ukuzenza njengoba bechitha amahora amaningi behlola izinhlamvu ezintsha nokuletha abanye...
Ungalokotha udabule nathi ?!Zilungiselele ukuba bamboozled ngayo yonke ingqondo emisha ezisonta puzzle!Hlanganisa ukuhlolwa kobuchopho bakho nokutholwa kwenselelo yobuchopho njenganoma iyiphi enye!Uma ungumthandi wemidlalo ekhohlisayo, nezimfumbe, ama-teasers obuchopho, imidlalo yobuchopho noma...
I-Upgradem ngumdlalo wokujaha okhokhelwayo lapho ezinye zezimoto ezisheshayo zibamba iqhaza futhi zilwela ukuthola umklomelo ohehayo wompetha bomqhudelwano.Hlanganisa iqembu lakho lefomula bese ufika kuthrekhi yomjaho bese uzijwayeza amathuba akho namasu azosiza ubuqhawe bobujaho. Shintsha imoto...
Hawu mantombazane! Siyakwamukela ku-Beauty SPA Salon! Umdlalo omuhle kakhulu wamantombazane!Manje, ungumnikazi walesi salon! Phatha amaklayenti akho ngezidingo ezihlukile.Sinezinsizakalo ezi-6 ezihlukene. Qala kusuka ku-SPA yobuso entofontofo. Geza ubuso bakhe, ususe amashiya akhe, uphinde uqhume...
Nguwe uMklami. Dala ama-skateboard amangalisayo futhi uwathengise.Bonisa amakhono akho okudala ngenkathi wenza ngezifiso ama-skateboards.
Umdlalo wekhilikithi wonjiniyela weLudo King! Umdlalo wekhilikithi wabadlali abaningi ojabulisa kakhulu online. Ingabe ungumuntu othanda iCricket? Unomdlalo wekhilikithi oyinselele kakhulu ezandleni zakho!Uyemukelwa ku- Cricket King ™ - umdlalo wamahhala we-inthanethi wabadlali abaningi...